तिमी मेरो हुन सकेनौ (प्रेम कथा) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १९:४२ English
तिमी मेरो हुन सकेनौ (प्रेम कथा)
सानु शाही ठकुरी, बर्दिबास, महोत्तरी ।
धेरै भयो आजकाल त तिम्रो सपना पनि देख्न छोडे।खै किन हो आजभोलि त तिमी हुँदा भन्दा नहुदा नै मलाई थोरै भए पनि शान्ति मिलेको आभाष हुन्छ सानू । तिमीलाई मैले नचाहेको त पक्कै होइन तर सबै चाहाना पूरा हुनुपर्छ भन्ने पनि कहाँ छ र ? कतिपय कुराहरू पाउदा जति आनन्द मिल्छ नि त्यो भन्दा बढी आनन्द गुमाउँदा हुनेरैछ । त्यो त यदि तिमीले पनि मलाई चाहेको थियौ भने तिमीलाई पनि आभाष भयो होला । तर म यसमा यति धेरै अपेक्षा पनि राख्दैन ।मैले चाहे भन्ने बित्तिकै तिमीले पनि मलाई मैले जतिनै चाहनु पर्छ भन्ने छैन ।जबर्जस्ती खाएको खाना र जबर्जस्ति लाएको माया उस्तै हो सानू।जबर्जस्ति खाएको खानाले अपच हुन्छ अनि जबर्जस्ति लाएको मायाले मुटु जल्छ।खानेले अपच भएको त सबैले देख्छन् कि त यसले पेस दुखाउछ कि त पखाला चलाउछ तर सानू मुटु जलेको कस्ले देख्छ र ?
हो म तिमीलाई मनदेखि चाहन्थे तर आफुलाई चाहिएको वस्तु सबैले पाउने रुनु कस्ले पर्थ्यो र ? अनि आँसु भन्ने वस्तु सबै प्राणिमा किन बन्थ्यो होला र ? मान्छेको मात्रै हैन मन त सबैको हुन्छ कुन चाहिँ जीवको मन छैन होला र ? पीर पखाल्ने ओखती भएर होला आँसु आखाको भित्र लुकेर बसेको हुन्छ । आँसु लुकाउने वस्तु भएर होला यसलाई लुकाएर राखिएको । त्यसैले सानू मैले पनि तिम्रो अगाडि आँसु लुकाएरै हासे । तिमीलाई खुसी मिल्छ भने म अझै पनि आँसु लुकाएरै हास्ने छु । हुन त आजकाल तिम्रो सन्चो बिसन्चो के छ सुन्ने मौका पनि मिलेको छैन । मलाई पुर्ण विश्वास छ सायद राम्रै छौ होला । किनकि तिम्रो खुसीको लागि मैले मेरो खुसी बलिदान दिएको छु । तिम्रो अतित सम्झेर म खुसी हुनेछु । तिमी भन्थेउ तिमी बिना म रित्तो हुनेछु।तिम्रो हरेक पाइलामा साथ दिनेछु । तिम्रो खुसी मेरो खुसी अनि तिम्रो दुख मेरो दुख । म हरेक रात सुत्ने बेलामा यिनै तिम्रा भनाइलाई पोको पारी बनाएको सिरानीमा सुत्छु । तिम्रो स्मृतिमा बगेको आसुको चुस्की लगाएर तिर्खा मेट्छु । त्यसैले होला मलाई कतिपनि तिम्रो अभाव महसुस भएको छैन ।
तिमी भन्ने गर्थौ ‘कालू एक जुनी त के हजार जुनी तिम्रै काखमा बिताउन पाउ ।’ वा कति गहकिला थिए तिम्रा भनाइ । जसलाई म तिम्रो मायामा मदहोस भएकीले के तौलन सक्थे र ? मायामा सबथोक राम्रो लाग्छ प्रत्येक शब्दमा बान्की परेका बेमौसमी फुलको सौन्दर्य सजिन्छ्न । लाग्छ जीवन नै मायामय भैरहेको छ । माया नै जीवनको सबथोक हो यसैले नै मानव जीवन सुन्दर बनाएको हो।मानव भएर जन्म लिएपछि कसैको मायामा हराउनु नै जीवनको सार्थकता हो । तर यि सब बेकार रैछन । मान्छेलाई अन्धभक्त बनाउने, कसैको जीवन तहसनहस बनाउने, बेसुरा बनाउने सबैभन्दा मै ठुलो हु भनेर घमण्ड दिमागमा भराउने वस्तु रैछ माया । जुन दिनदेखि तिमीबाट अलग छु त्यो दिनदेखि म मानव जीवनको सार खोज्दै छु । कहिलेकाही त लाग्छ जीवनको सार्थकता खोज्दा खोज्दै आफै दार्शनिक पो बन्ने हो कि ? ‘नमरी स्वर्ग देखिदैन’ भन्ने भनाइ अहिले मैले आफ्नो जीवनमा लागू गरेको छु । म आफैंले भोगेर जीवन जीउन जानेको छु । तिमी मेरो गुरु हौ कालू । तिमीले नै मलाई जीवनको पाठ सिकायौ । जसमा तिमीलाई लाखौं लाख धन्यवाद दिए पनि कमै हुन्छ होला ।
जीवनको पहिलो गुरु मेरा बा आमाले मलाई यो घर्तीमा जन्म दिई मान्छे भै बाच्न र संघर्ष गर्न सिकाउनु भयो । त्यसपछि स्कुल र कलेजले मलाई पढ्न, लेख्न सिकायो अनि डिग्रीको प्रमाणपत्रका दिलायो अनि तिमीले यी भन्दा फरक जीवनको अनुभुति दिलायौ जुन घर परिवार र विश्व विद्यालयमा सिक्न सकिदैन । हो यो अर्थमा एउटा शिक्षक र शिक्षण संस्था भन्दा पनि माथि छौ । तिमी भुल्न चाहेर भुल्न सकिने वस्तु त हुँदै हैनौ । एक्लै भएर पनि सङ्गै हुने खुसी दिएर पनि आँसु झार्ने अचुक ओखती हौ । तिमी बस जहाँ छौ त्यहीँ खुसी र खुसी भएर बस कालू।मैले जस्तै तिमीले पनि मलाई सम्झनु पर्छ र भुल्नु पर्छ भन्ने छैन तिम्रो मनको मर्जी तिमी आफै हौ जसरी बाच्न मन छ त्यसरी तिमी बाच्न सक्छौ यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत पक्कै कसैले गर्न सक्दैन । म पनि मेरो मनको म आफै रानी हु । तिम्रो मनको रानी हुने रहर त मैले नगरेको कहाँ हो र ? तर तिम्रो मनको रानी हुन नसकेकोमा कुनै गुनासो छैन ।तिम्रो मनको रानी यदि म भएको भए म त मेरो लागि खरानी मात्रै हुन्थे । तिम्रो, तिम्रो परिवारको, समाजको, इष्ट मित्रको लागि जल्दाजल्दा मेरो अस्तित्व हराउथ्यो । केवल म तिम्रो अर्धाङ्गिनी मात्रै हुन्थे । तर म यो सब हुनबाट बचे यसको श्रय पनि तिमीलाई नै सुम्पेको छु ।
म स्वार्थमा बाच्ने अनि फेरि कसैको दबाबमा नाच्ने पनि कदापि होइन । मैले तिम्रो मन दुखाउनु जमर्को पनि गरेको हैन । केवल केही तिमीसँग बिताएका पलहरुको स्मृति मात्रै गरेको हु कालू । तिमी चाहे जे सुकै सोच मलाई कुनै गुनासो हुनेछैन । म त पिरमा पिरती गास्न सक्छु अभाव र दुःखमा पनि बाच्न सक्छु । बिछोड र वेदना मेरा आत्मीय मित्र हुन म यिनैलाई साथी बनाइ बाच्न बानी परेको छु । तिमी पनि मैले जस्तै बाच भन्न खोजेको पटक्कै होइन कालू । तिमी जसरी चाहन्छो त्यसरी बाच । जीवनको यात्रामा भेटिएका छोटो समयका यात्री थियौ हामी गन्तव्यमा पुगेपछि छुट्टीएर आफ्नो आफ्नो बाटो समात्यौ । तिम्रो एउटा कुराले मलाई अझै पनि झस्काउछ ‘हामी दुइको प्रेम कथा इतिहासको पानामा लेखाउनुपर्छ ।’ इतिहासको पानामा त लेखाउन सकेनौ कालू तर मैले मेरो मनको पानामा लेखाएको छु । तर तिमीले पनि लेखाउनै पर्छ भन्ने छैन । अहिले पनि म यी तिम्रा प्रत्येक शब्दका अक्षर अक्षरमा डुबुल्की मार्दै बाकी जीवन बिताउदै छु । यति मिठो याद दिलमा खोपियो कि जुन कुनै पनि रसायनले मेटाउन सक्दैन । जुठो भाडा माझ्ने, कुनै पनि वस्तुमा लागेको दाग हटाने धेरै साबुन बजारमा पाइन्छ तर अहिलेसम्म कुनैपनि वेैज्ञानिकले मन माझ्ने र मायाको दाग मेट्ने साबुन बनाएको छैन । यसमा खुसी नै मान्नुपर्छ कालू किनकि तिम्रो माया मेट्ने वस्तु यदि भएको भए म त रित्तो केवल हाडछाला र रगतको थुप्रो मात्रै हुन्थे होला ।
तिमी मेरो हुन नसके पनि कसैको त पक्कै हुन्छौ होला । मैले जस्तै मलाई मनभरी राखेर अरु कसैलाई सजाएर राखेको छैनौ त होला नि, जे होस् तिम्रा यादहरु जम्मै संगालेर राखेकी छु मैले ।
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:५१ मा प्रकाशित